कांग्रेसको नेतृत्व कसरी चुनिन्छ ? जान्नैपर्ने यी वैधानिक प्रावधानहरू - Dainiki Khabar
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले पार्टीको नेतृत्व चयनका लागि भदौ १६–१९ गतेसम्म काठमाडौंमा १४ औं महाधिवेशन गर्ने भएको छ । महाधिवेशनमा नेतृत्वको दौडमा रहेका नेताहरूले सक्रियता देखाउन थालेका छन् । नेतृत्वको दौड सँगसँगै पार्टीमा क्रियाशील सदस्यता विवाद देखिएको छ । पार्टीमा क्रियाशील हुन चाहनेलाई सदस्यता दिन किन विवाद ? क्रियाशील सदस्य संख्या नै पार्टी नेतृत्व चयनमा निर्णायक हुने भएकाले आ–आफ्नो पक्षका बढी क्रियाशील सदस्य बनाउन पार्टीमा विवाद हुने गरेको छ । पार्टी महाधिवेशनको आधारभूत तह भनेकै क्रियाशील सदस्य हुन् ।
देशभर रहेका कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य वडा अधिवेशनमा भेला हुन्छन् । कांग्रेसले आगामी साउन १२ गते वडा अधिवेशन तोकेको छ । वडा अधिवेशनबाट क्रियाशील सदस्यले मतदान गरी प्रदेशसभा क्षेत्रको अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था पार्टीको विधानमा छ । क्रियाशील सदस्यहरू मध्येबाट नै उम्मेदवार भएर क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्दा समावेशी प्रणालीलाई अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । वडाबाट प्रत्यक्ष चुनिने हरेक ९ जनामा कम्तीमा ३ जना महिला हुनुपर्ने, १५० जनाभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य रहेको वडाबाट प्रति १०० क्रियाशील सदस्य बराबर ६ जना थप्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । त्यसअनुसार क्रियाशील सदस्यता १५० भन्दा बढी भएको वडाबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधिका लागि १६ जना निर्वाचित हुने गरेका छन् । वडा सभापति प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनका लागि पदेन प्रतिनिधि हुने भएकाले १६ जना प्रतिनिधि कायम हुने गरेका छन् । यसमध्ये जनसंख्याको बनोटको आधारमा दुईतिहाइ संख्या समानुपातिक आधारमा छनोट गर्नुपर्छ । आगामी साउन २० गते क्षेत्रीय अधिवेशन हुने तय भएको छ ।
केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेको व्यक्ति प्रादेशिक अधिवेशनको पनि प्रतिनिधि हुने प्रावधान रहेको छ । प्रादेशिक अधिवेशनका लागि चयन भएको प्रतिनिधि केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिको पदमा उम्मेदवार बने प्रदेश प्रतिनिधि स्वतः रद्द हुने व्यवस्था समेत छ । संघीयता पश्चात् प्रादेशिक संरचनाको अभ्यास कांग्रेसमा पहिलोपटक सुरू हुँदैछ । प्रदेश अधिवेशन भदौ १ र २ गते हुने गरी निर्धारण गरिएको छ । केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनका लागि क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेको ४ वर्ष हुनुपर्ने प्रावधान छ । प्रदेश अधिवेशनको प्रतिनिधि हुन क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रदेशभित्रका जिल्ला सभापति प्रादेशिक अधिवेशनमा स्वतः प्रतिनिधि बन्न पाउने हुन्छन् । भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका प्रमुखहरू प्रादेशिक अधिवेशनमा प्रतिनिधि बने पनि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था रहेको छ । विधान अनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन हुनुभन्दा १ वर्षअघि नै स्थानीय तहका अधिवेशन सकिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रदेश अधिवेशन केन्द्रीय महाधिवेशन हुनुभन्दा ३ महिना पहिले गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर क्रियाशील सदस्यतामै विवाद हुँदा विधानको व्यवस्था कागजमै सीमित रहेको छ । यसपालि केन्द्रीय महाधिवेशन हुनु १ महिनाअघि मात्रै स्थानीय तहको अधिवेशन सुरू गरिने भएको छ ।
विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट क्रियाशील सदस्यताको संख्याका आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ । १०० क्रियाशील सदस्यता रहेको देशबाट जनसम्पर्क समितिको अध्यक्ष मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था रहेको छ । ५०० भन्दा बढी क्रियाशील सदस्यता भएका देशबाट अध्यक्षसहित ७ जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने पाउने छन् । २ हजारभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भएको देशबाट १४ जनाले केन्द्रीय महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने छन् ।
Previous आईएमईआई दर्ता प्रणालीमा समस्या, अवैध मोबाइल दर्ता गर्ने समयसिमा केही दिन मात्र बाँकी
Next काभ्रे धुलिखेलमा ‘टिकटक बर्गर हाउस एण्ड तन्दुरी चिकेन’ संचालनमा आउँदै